Hetsika Motorola iray: famaritana, vidiny ary famoahana | Androidsis
Motorola One Action: The New Android One Phone
Eder Ferreno | | Motorola, Finday
Araka ny nambara omaly, Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny Motorola One Action. Miatrika ny telefaona fahatelo an'ny marika mampiasa Android One ho rafitra fiasa izahay. Fitaovana iray izay natomboka tamin'ny afovoany, misy singa vitsivitsy mitovy amin'ny One Vision natolotra tamin'ity taona ity ihany koa. Na dia miavaka ambonin'ny zava-drehetra aza izy noho ny fakantsary, izay no manome ny anaran'ny telefaona azy koa.
Ny Motorola One Action dia maodely iray tena feno, izay miavaka amin'ny fananana fakan-tsary. Safidy mahaliana, izay mahatonga azy io ho maodely hafa amin'ity sokajy orinasa ity, saingy izay mpampiasa dia azo antoka fa tena tiana be. Inona no azontsika antenaina amin'ny telefaona?
Ny telefaona dia manolo-tena amin'ny endrika maoderina, misy lavaka ao amin'ny efijeryo. Hita eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery izy io. Fakan-tsary maromaro no miandry antsika ao ambadiky ny fitaovana, izay tsy isalasalana fa natao hanomezana azy tsara kokoa. Ny fakan-tsarin'ny dian-tànana dia hita ihany koa ao ambadiky ny telefaona.
Motorola One Vision: ofisialy ny taranaka faharoa miaraka amin'ny Android One
1 Famaritana Motorola One Action
Famaritana Motorola One Action
Amin'ny ambaratonga teknika, ny Motorola One Action mizara lafin-javatra sasany amin'ilay One Vision volana vitsivitsy lasa izay, rehefa mampiasa processeur Samsung amin'ity tranga ity aho. Izy io dia telefaona izay mahavita tsara ao anatin'ny elanelam-potoana Android, satria manana toetra iraisana amin'ity sehatra tsena ity, izay omen'ny mpanjifa lanja. Mety ho mpanavakavaka ny fakantsarinao. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Sarimihetsika: LTPS IPS 6,3-inch miaraka amin'ny FullHD + vahaolana 2.520 x 1.080, 432 dpi
Mpikirakira: Samsung Exynos 9609 octa-core dia miorina amin'ny 2,2 GHz
Fitehirizana anatiny: 128 GB (Azo zahana amin'ny karatra microSD hatramin'ny 512 GB)
Fakan-tsary aloha: 12 MP miaraka amina f / 2.0 aperture
Fakan-tsary any aoriana: 12 MP misy vava f / 1.8 + 5 MP + fakan-tsary feno zoro malalaka amin'ny zoro f / 2.2
Rafitra miasa: Android 9 Pie (Android One)
Batterie: 3.500 mAh misy fiampangana haingana 10 W
Fifandraisana: 4G LTE Cat 6, WiFi ac, GPS / aGPS / GLONASS / Galileo, Bluetooth 5.0, USB-C
Ny hafa: sensor momba ny tanan-tànana any aoriana, NFC
Refy: 160,1 x 71,2 x 9,15 mm
Milanja: 176 grama
Ny Motorola One Action dia nahazo ny anarany misaotra ny action camera fa ao anatinay izahay. Araka ny hitanao dia mampiasa sensor telo izy ao an-damosiny, ka ny iray amin'izy ireo dia ity fakantsary na fakan-tsary ity. Izy io dia zoro somary malalaka an'ny 117º, izay mifantoka indrindra amin'ny fiasan-dahatsary. Ny orinasa dia mampiasa ny Pixel Binning amin'ity tranga ity, ankoatry ny fananana fomba manokana ahafahana mandrakitra horonantsary mitsangana amin'ny alàlan'ity zoro malalaka ity. Nanome ny solomaso ho 90 degre izy ireo.
Ho an'ny ambiny, dia hitantsika fa finday tena mahavita be eo afovoany. Famolavolana maoderina, miaraka amin'ny efijery lehibe, processeur tsara manome fahombiazana tsara sy bateria 3.500 mAh, izay hanome antsika fahaleovan-tena ampy. Ankoatr'izay dia manana famahanana haingana izy io, izay manohy mahazo ny fisian'ny tsena. Etsy ankilany, ny sensor ny dian-tànana dia voatazona ao ambadiky ny fitaovana amin'ity tranga ity.
Ny hetsika Motorola One Hivarotra amin'ny fomba ofisialy izy io amin'ny faran'ny volana aogositra ity. Na dia tsy manana ny daty marina hanombohana azy any Espana aza izahay, na izany na tsy izany dia afaka afaka mividy amin'ny fomba ofisialy an'ity finday ity isika afaka roa herinandro. Ny orinasa dia nanambara ny pitsopitsony mahaliana amin'ity raharaha ity.
Tonga amina kinova tokana ilay fitaovana, izay hanana ny vidiny 279 euro. Ny Motorola One Action dia natomboka tamin'ny loko roa, araka ny hitanao amin'ity sary eo ambony ity. Afaka mifidy ny fotsy / volondavenona sy ny feo manga ny mpampiasa. Ireo ihany no safidy tokana amin'ny resaka loko eo amin'ny elanelam-potoana vaovao miaraka amin'ny Android One amin'ny marika. Ahoana ny hevitrao momba ity telefaona vaovao avy amin'ny marika ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola One Action: The New Android One Phone
Dr. Mario World dia lavitra ny fahombiazan'ny andrasan'ny Nintendo
Ireo sary tena izy ireo dia manamafy ny famolavolana ny Huawei Mate 30